2020 no taona ratsy indrindra ho an’ny mpanoratra an-gazety ao Kenya · Global Voices teny Malagasy
Iharam-panafihana ny fahalalaham-pitenenana mandritra ny valan'aretina
Voadika ny 18 Novambra 2020 5:27 GMT
Vakio amin'ny teny Français, English, русский, Türkçe, Español, Português, Ελληνικά, Română , Italiano, عربي, English
Arabe foana ao Nairobi, Kenya, nandritra ny valan'aretina coronavirus 2020, 22 Avrily 2020. Saripikan'ny Banky Mondialy/Sambrian Mbaabu via Flickr CC-BY-NC-ND-2.0.
Naotin'ny tonian-dahatsoratra: Ny tantara dia avy amin'i Victoria Rubaridi ka ao anatin'ny tetikasa PROTECT tohanan'ny governemanta UK ho an'ny ARTICLE 19 ary navoaka eto indray araka ny fiaraha-miombon'antoka mifampizara nifanaovana.
Hatramin'ny nipongaran'ny coronavirus vaovao tao Kenya tamin'ny volana marsa, mihoatra ny 47 ny trangam-pisamborana tondromolotra, fanafihana sy fanohintohinana nihatra tamin'ny blaogera, mpikatroka anjotra ary mpiaro ny zon'olombelona, araka ny ARTICLE 19, fikambanana iray tsy miankina amin'ny governemanta mifantoka amin'ny fahalalaham-pitenenana. Azo ampitahana izany amin'ny tranga miisa 15 nandritra ny dimy volana alohany (Oktobra 2019-Marsa 2020).
“Ho an'ny mpikatroka an-jotra sy mpanoratra an-gazety ao Kenya, ny taona 2020 no ratsy indrindra amin'izay voarakitra,” hoy i James Wamathai, talen'ny Bloggers Association of Kenya (BAKE). “Nihavinitra kokoa ny tontolo nandritra ny areti-mandringana. Mihevitra aho fa ezaka nifarimbonana avy ao amin'ny governemanta izay hanampenam-bava ireo feo maningana.”
Mino i Wamathai fa fanararaotana avy amin'ny governemanta kenyana ny famoretana. Amin'ny ankamaroan'ny tranga, ampangaina ho manely vaovao tsy marina amin'ny torohay mahasahana ny COVID-19 ny mpikatroka an-jotra na ny blaogera. Voamarika ho samy efa namoaka votoaty mitsikera ny governemanta avokoa ireo blaogera sy mpikatroka rehetra ireo.
Tamin'ny volana jona, noraofin'ny polisy tao an-tranony ny i Mutemi wa Kiama mpikatroka menavazan'ny rariny ara-tsosialy. Na dia navotsotra tsy nisy fiampangana aza izy taty aoriana, dia nisy fitoriana naraham-pianianana napetraky ny mpanao famotorana tao amin'ny lapan'ny fitsarana iray tao an-toerana natao hanenjehana azy ho mamoaka vaovao diso araka ny lalànan'ny heloka bevava an'habaka, izay mety hiafara amin'ny fandoavana onitra na famonjana.
Kiama niteny tamin'ny ARTICLE 19:
Ni-retweet (nampita) randran-dresaka iray izay manome ny tantaran'ny fampitam-pahefana avy amin'ny lehibe ara-panjanahantany mankany amin'ireo mpisehatra ara-politika amin'izao fotoana izao aho. Nalaza haingana dia haingana izany ary tsy nankasitrahan'ny olona sasany.
Milaza i ARTICLE 19 fa mampanahy dia mampanahy ireo fihetsika mafaitra amelezana ny fahalalahana miteny anjotra ao Kenya izao ary ao anatin'ny fironam-paritra mamoritra hatrany sy masiaka amin'ireo mitsikera anjotra.
Niteny i Mugambi Kiai, talem-paritra Afrika Atsinanana ARTICLE 19:
Manahy ny ARTICLE 19 Afrika Atsinanana fa mampiasa ny fielezan'ny coronavirus ny governemanta hanararaotana mba hanamafisana ny fepetram-pamoretana. Tsy maintsy manao famotorana ny polisy ary mitsaa ireo mpandika lalàna. Tokony avela hiditra sy hitatitra malalaka sy marina amin'ny hetsiky ny governemanta amin'ny fiadiana amin'ny fiantraikan'ny fielezan'ny coronavirus ny mpanoratra an-gazety sy ireo servisy hafa ilaina.
Mitovy hevitra amin'izany ny mpisolovavan'ny zon'olombelona Victor Kapiyo:
Hitantsika ny fampiasana ny lalàna tahaka ny famoahana vaovao diso, izay sainin'ny rehetra fa natao hiatrehana ny vaovao hosoka, saingy rehefa jerena dia nampiasaina hampanginana ireo olona mitsikera ny governemanta.
Nampitandremany fa hanamafy ny kolontsaim-pampitahorana efa miraikitra ao Kenya ampolony taona maro ireo fepetra ireo.
Fifantohana amin'ny mpanoratra an-gazety sy mpikatroka vehivavy
Mbola ratsiratsy kokoa ny toe-draharaha ho an'ny vehivavy mpikatroka sy mpanoratra an-gazety, fa maro ireo miaina fanentanana fampijaliana araham-pandrahonana amin'ny aterineto. Manolo-kevitra ny Banky Afrikana Misahana ny Fampandrosoana fa iharan'ny fanohintohinana anjotra im-27 avo heny mihoatra noho ny lehilahy ny vehivavy.
“Heverina ho fitaovam-pahafinaretana ara-nofo aho ka velesina amin'ny bikako. Misy aza moa ny mamely ny fianakaviako anjotra,” hoy ny fanazavan'i Wanjeri Nderu mpiaro ny zon'olombelona. “Mila fiofanana fiarovana an-tsivalo (dizitaly) izahay, na mbola ho hitantsika fa mikombona ny feon'ny vehivavy.”
Manahy ny mpanoratra an-gazety ao Kenya fa, satria mbola mitohy ny valan'aretina ary mihamitombo ny fiankinana amin'ny fipetahana amin'ny media sosialy, dia hihabbetsaka sy hihavinitra kokoa ny famoretana.
“Tahaka ny tsy mahafehy ny toe-draharaha ny governemanta ka tiany ho azo ny sehatra anjotra,” hoy i Nderu. “Mahatsikaritra fisamborana izahay, sy blaogera na mpikirakira anjotra karamain'ny governemanta hanaratsy ireo mpikatroka anjotra.”
Ho setrin'ny fanehoan-kevitr'i Nderu, Joe Mucheru, sekreteram-panjakana misahana ny TIC, ny fanaovaozana ary ny fisahanana ny tanora ao Kenya, niteny tamin'ny ARTICLE 19 hoe:
Ny tanjonay tokana, rehefa mampita fifandraisana ao amin'ny media sosialy, dia ny mampahafantatra amin'ny vahoaka ny fivoaran'ny tetikasa sy ny filaminana ary ny fahasalamana izay hanolo-tanana azy ireo.